Fikradda naqshadaynta ee 24 ee ugu fiican ee loogu talagalay ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadaynta ee 24 ee gacmaha iyo ragga
Laga soo bilaabo munaasabadaha ilaa xitaa ninkii caadiga ah ee wadada, qaabka muuqda ee aan la taaban karin ayaa noqotey meesha ugu habboon ee aad ka heli karto tattooadaada. Gacanta waxaa loo yaqaanaa inuu yahay midka ugu badan ee la soo bandhigo marka ay timaado shaati.
Markaad haysato naqshad gaar ah ee xakamaynta maskaxdaada, ha u ogolaan kharashka in uu kaa joojiyo inaad hesho khalad. Qiimaha tattoo ee sidan oo kale ah ayaa laga yaabaa in ay niyad-jebiyaan dad badan oo ka soo jeeda haddii ay ka imanayaan xirfadle. Habka ugu fiican ee aad ku heli lahayd heshiis wanaagsan oo taatuure ah waa marka aad qaadato waqtigaaga si aad u eegto waxa aad rabto.
2. Tartanka iyo Scorpion Hand Tattoo
Dukaamadu mar dambe kama duwo waxyaabo maaddo ah. Waxaad ku dukaameysan kartaa nooca gacanta #tattoo aad rabto inaad hesho. Ganacsiga tattoo gacmeed ma uusan bilaaban maanta.
3. Tartanka gacmaha
Maalmahan, waxaan arki karnaa boqolaal farshaxanayaal ah inay ku tababaraan taatuuga sidan oo kale oo aanad ku caawin karin laakiin waxay ka fajacayaan sida ay u abuuraan farshaxankan.
4. Tattoos buuxa
Qaar ka mid ah farshaxanka ugu khibrad badan waxay noqon karaan kuwo qaali ah oo la kiraysto marka la barbar dhigo farshaxan yar oo xirfad leh. Waxaa jira farshaxanno sumcad leh oo kaa qaadaya saacad ahaan tanina waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah haddii aad diyaar u tahay kharashkaas.
5. Tartanka iyo dhirta gacmaha
Waa inaad fahamtaa inkasta oo qiimaha sare, haddii xirfadle xirfad leh uu ku lug leeyahay, helitaanka tattoo gacanta gacanta waa natiijada ugu dambeysa.
6. Tattoos Seddex Gacmood leh
Haddii aad ka fekereyso helitaanka tattoo gacanta ah, taas macnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad isticmaasho farshaxan xirfad leh oo kaa caawin doona. Ma jirto wax aad u qurux badan oo aad u qurux badan oo aad talefoonka gacantu u eegi karto marka aad haysato farshaxanka saxda ah iyo meesha ugu fiican ee loogu talagalay.
7. Tattoos gacmeedka ubaxa
Qiimaha helitaanka tattoo gacanta waxay ku xiran tahay miisaaniyaddaada. Mid ka mid ah su'aalaha ay dadku waydiisanayaan ka hor intaysan helin tattoo gacanta sidan oo kale waa in la ogaado qiimaha tattoo gacanta. Way fududahay inaad hesho tattoo gacanta haddii aad fahamto waxa muhiim u ah.
Waxaa jira boqolaal ka mid ah tattoo-gacmeedyada Waxaad u tegi kartaa illaa iyo inta aad u habeyneysid tattoo-gaaga si aad u sameyso mid gaar ah oo aan caadi ahayn.
9. Tattoo Hand Fearful Hand
Waa inaad haysataa weji waji ah oo lagu wajaho gorgortankaaga farshaxankaaga ka hor inta aadan aqbalin waxa laguu sheego farshaxan. La kulan sawir-qaadahaaga kahor intaanad tegin tattoo-gacmuhu waa muhiim. Nidaamku wuxuu kaa caawinayaa inaad ka fogaato dhibaatada iyo sidoo kale sameyso doorashada saxda ah.
10. Tattoo gacmaha
11. Tattoo gacmeedka gacanta
13. Dhismaha Dhadarka Dharka ah ee Sare
Dad badan oo aan rabin in ay lumiyaan shaatigadoodii, waxay isticmaalaan naqshad noocaan ah. Waad marqaati kartaa in taatuuga gacanta uusan laheyn cabsi-galiye. Waxaad samayn kartaa dhamaan naqshadeynta hal-abuurka ah oo aad ku muujin kartid heer raaxo ah. il image
14. Sawirada gacmaha oo dhan
Ma rabi kartid in aad leedahay tattoo soo jiidasho yar oo hadda ah in ay jirto isbeddel degdeg ah ganacsiga tattoo inking. Xaggee ayaad u maleyneysaa inaad ku jirtid tattoo gaar ah jirkaaga? il image
15. Sawirada gacmaha ubaxyada
Waxaa jira meelo badan oo aad ka heli kartid muqaalka laakiin naqshadeynta tattoo gacmeed waa hal meel oo ah in badan oo naga mid ah laga yaabo in aan rabno inaga. il image
16. Cuntada gacmaha mugdiga ah
Dhibaato ma ahan naqshad aadan ka heli doonin gacanta. il image
Naqshadeynta gacmaha oo dharbaaxo leh
17. Sawiro gacmeed qurux badan
18. Tartanka gacmaha fudud
Marka ay timaado qaab fudud oo loo samaysan yahay tattoo, waxaad weli samayn kartaa inay dhacdo. il image
19. Cuntada gacmeed lagu qalay
Tattoo loogu talagalay in lagu eego sidan ayaa kuu sahleysaa in aad ku darto muuqaalo iyo xitaa naqshadeeda. Waxaa hubaal ah inaysan dhammaaneynin waxa aad sameyn kartid abuuristaada. il image
20. Tattoo gacmeedka oo dhan
Dumarka waxay xitaa tagi karaan waddo dheer si ay u hubiyaan in ay u muuqdaan inay yihiin jinsi iyo dheddig ah oo leh naqshad ay u baahan doonaan gacmahooda. il image
21. Tattoo gacan qabta
Dhamaan waxaad u baahan tahay waa inaad raadiso fannaaniye xirfad leh oo raaci doona riyooyinkaaga markuu isagu ama iyadu soo saaro naqshadahan oo kugu fiican. il image
22. Tattoo gacmeedka ubaxa
Ugu dambeyntii, maxaad u maleyneysaa habka tattoo gacmeedka sidan oo kale? Habka ay u muuqato wuxuu fududeynayaa oo fududeynayaa. Moodhiyadu ma joojin karaan jecel naqshadeynta tattoo maxaa yeelay qaabka ay u egtahay. Waxaad u sheegi kartaa in tattoo-ta ay soo gasho markaad isku dayeyso inaad ka fiirsato kuwa kale ee tattoo-ga ah il image
23. Beautiful qurxiyo gacmeedka ubax
24. Tattoo gacmeed cajiib ah
Halkan riix halkan si aad u hesho Tattoos Design gacmo badan
tattoos sleeveTattoo infinitytattoos qoortatattoos moontattoo tilmaantattoos qosol lehsawir gacmeedhenna tattoofikradaha tattoowaxay jecel yihiin tattooscalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos gacantajimicsiga bisadahatattoos iskutallaabtaTartoo ubax badantattoo dheemanTattoo Feathertattoossawirrada raggaTilmaamta jaalaha ahtattoos qorraxdaDhaqdhaqaaqalibto libaaxtattoos cagtaku dhaji tattoosarrow Tattooshaatiinka shiidantattoo indhahaJoomatari Tattoosnaqshadeynta mehndiwaxaa la dhajiyay tattoosgadaal u laabotattoos eaglelammaanahatattoo ah octopuskoi kalluunkatattoo maroodigatattoo biyo ahsawirada malaa'igtashimbir shimbirgaraacista gacmahatattoos qabaa'ilkatattoos taajkiilaabto laabtaTattoos Wadnahataraagada kubbaddamuusikada muusikadasawirada gabdhahatattoos ubaxtattoos saaxiib saxa ah